Ngonyaka wokuqala wokuphila ingane yakho idinga ukunakekelwa ngokukhethekile. Phakathi nale nkathi, kukhona ukuthuthukiswa ngokushesha umzimba neurophysiological amancane. Isinyathelo esibaluleke kunazo yikhono layo ukugcina ikhanda womntwana. Leli khono emvumela ingane ukufunda ukuba ahlale, liphenduka unyawo lonwabu futhi ukuhamba, futhi kuwuphawu nokukhula okuvamile nokuthuthukiswa uhlala.
Imisipha ezisanda kuzalwa namanje kakhulu kabi athuthukile skeleton bahlanganisa ikakhulu uqwanga ezithambile nokunyakaza kabi esihlelwe. Ngakho-ke, ezinyangeni zokuqala zokuphila, ikhanda womntwana kufanele kugcinwe ngokucophelela. Ngaphezu kwalokho, isici esiyinhloko umzimba usana umuzwa okhethekile imisipha ngokuhlanganyela othiwa imisipha ithoni. Lesi sici - umfutho yasekuqaleni ukunyakaza okunjalo kwenza imvuthu bayazi njengoba ephakamisa ikhanda, ikhono phenduka, ukufinyelela i-ithoyizi noma ahlale. Ngeshwa, kaningi ithoni kwemisipha izinsana ayilungile. Isizathu salokhu kukhona imvelo abampofu, izinhlobo ezahlukene ukucindezeleka futhi namanje kunezici eziningi ezingezinhle. Kunezinhlobo eziningana eziyisisekelo iziyaluyalu: hypotonia, hypertonia, asymmetry kwemisipha ithoni, nabanye. Kuyinto lezi semfene oluyisisekelo Kulezi zimo, lapho ingane iyagula igcina ikhanda lakhe izinyanga 4-5, noma okuphambene nalokho - kahle selokhu kwazalwa.
Kahle kahle, ingane esifanayo kuleli viki 4th wokuphila, elele ngesisu sakhe, uyakwazi ukuvezela kafushane ikhanda, ngisho usijikeleze bacondze etindzaweni letehlukene. kokuzijayeza ngelanga ivumela imvuthu kuya ekupheleni kwenyanga 2nd ukugcina ikhanda kule sikhundla lisalele, ngoba 30-60 imizuzwana. Kodwa Imisipha yentamo ngesikhathi esifanayo zinwetshwe zaze zaphela - ukuze ukwazi ukuzizwa kubo shaking. 3rd nenyanga 4th - isikhathi lapho ingane iqala ukuthi uyaliphakamisa ikhanda lakhe u-Adalberto isikhathi eside, ngokuba hhayi kuphela esiswini, kodwa futhi ngemuva noma izingalo unina. ngenyanga-eziyisithupha izingane bayaqiniseka ukukhulisa bese ugcine ekhanda kwakho kunoma iyiphi indawo. Ngakho, lo mbuzo: lapho ingane iqala ukuthi uyaliphakamisa ikhanda lakhe, ungaphendulwa singalendlela: ngokwesilinganiso, kuthatha indawo kwi 3rd - ngenyanga 4th zokuphila.
Nezindinganiso Yiqiniso, kuhle. Kodwa ungakhohlwa ukuthi zonke kid - kuyinto ngabanye, okusho ukuthi abe kahle siqu ukuthuthukiswa isikhathi sabo. Ngakho ungakhathazeki uma ingane yakho 2.5 izinyanga eside ngokukhululekile ubambe ikhanda. Vele unake ukuziphatha nokunyakaza imvuthuluka, futhi wavakashela njalo wezingane abafanelekayo, abazokwazi ngesikhathi ukuxilonga iziyaluyalu ekuthuthukiseni futhi ukweluleka izinqubo ezidingekayo. Isizathu sokukhathazeka Kuyaphawuleka ukuthi ezinyangeni ezingu-3, ingane yakho ayifuni ukuzama ukukhulisa wenziwe yinhloko noma abakwazi ukugcina imizuzwana ke ambalwa okungenani. Kulokhu, kufanele ukubhekana ukuba udokotela wezinzwa.
Abazali abaningi bazibuza umbuzo: kanjani ukufundisa ingane ukugcina ikhanda lakhe? Yiqiniso, izindlela ezikhethekile imfundiso abekho. Yebo, akudingeki - inqubo kufanele kube zemvelo. Kodwa ijubane ngokusebenzisa umsebenzi, aqeqeshe imisipha efanele, massage ekhethekile noma ukuthuthukisa amadivayisi kungenzeka ngisho kudingekile.
I kaningi ubeka umntanakho ngesisu sakhe, ngokushesha uyokwazi ukukhulisa ekhanda. Izingane eziningi bayajabula abalale lwesisu, kodwa abanye iyenqaba ukwenza ukuba kulesi sikhundla. Kulokhu, ukusiza amathoyizi, kukuphazamise imvuthu ngakulona, fitboly noma ekhethekile amacansi zemfundo. Ngaphezu kwalokho, lapho ingane iqala ukuthi uyaliphakamisa ikhanda lakhe, kungashiwo zigqokwe izandla ngendlela ekhethekile: isandla sikamama eyeluliweyo ingaphansi encane isisu, kanti eyesibili - ngaphansi ipeni isekela kuye nasesifubeni.
Lapho ingane iqale ukubamba ikhanda lakhe, imisipha entanyeni namanje kudingeka baqiniswe. Ukuze wenze lokhu, umsebenzi kufanelekile, ngaphansi eniyokwazi ngobumnene siphakamise imvuthu emahlombe, entanyeni ukusekela isandla sakhe simfundise bend isibambo ngesikhathi izindololwane.
Yiqiniso, massage and umzimba ibalulekile, kodwa azikwazi esikhundleni ukukhathazeka kwakho ngobuqotho, iqhaza nothando, umuzwa wokuthi ingane yakho ukuthuthukisa futhi ikhule unempilo futhi bajabule.
Monet "Magpie". Winter ngobuciko Etretat